အမေရိကန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်နေစဉ်၌ အီရန်နိုင်ငံက သမ္မတထရန့်န - Yangon Media Group
အမေရိကန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်နေစဉ်၌ အီရန်နိုင်ငံက သမ္မတထရန့်န
နယူးယောက်၊ ဧပြီ ၂၂
အီရန်နျူကလီးယားသဘော တူညီချက်ကို ပြောင်းလဲရန် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ တိုက်တွန်းမှုသည် အလွန်အန္တရာယ်များပြီး နိုင်ငံများသည် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခြင်း မလုပ်ဆောင်သင့်ဟု အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သတိ ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်များသည် နျူကလီးယားလက်နက် ဖျက်သိမ်းရေးဆွေးနွေးနေစဉ် အီရန်နိုင်ငံ၏ သတိပေးချက်ထွက် ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် နယူးယောက်မြို့တွင် သတင်းသမားများနှင့် စကားပြောစဉ် မိုဟာမက် ဂျာဗဒ်ဇာရစ်ဖ်က ”ပြင်သစ်သမ္မတ အီမန်နျူယယ်လ်မက်ခရွန်နှင့် ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အိန်ဂျယ်က မာကယ်တို့သည် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလိုက်လျောဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် အချည်းအနှီးလုပ်ရပ်သာ ဖြစ်မည်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အီရန်နိုင်ငံကို အမေရိကန်နိုင်ငံက စီးပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်ကိစ္စကို သမ္မတထရန့်က မေလ ၁၂ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုသည် အီရန်နိုင်ငံနှင့် အခြားအင်အားကြီး နိုင်ငံခြောက်ခုကြား ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် က ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်ကို ပြင်း ပြင်းထန်ထန်ထိုးနှက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မက်ခရွန်နှင့် မာကယ်တို့သည် ယခုအပတ်တွင် ဝါရှင်တန်၌တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရန်ရှိသည်။ ”အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ စာ ချုပ်မှာ ပါဝင်တဲ့အချက်တွေကို လုပ် ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်ရုံသာမဟုတ် စာချုပ်မှာပါတာထက် ပိုပြီးတောင်း ဆိုနေတယ်”ဟု ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတက်ရောက် ရန် နယူးယောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိ လာသည့် ဇာရစ်ဖ်ဇစ်က ပြောကြား ခဲ့သည်။
သဘာဝသစ်တောများ၊ ချောင်းမြောင်းများ ပျက်စီးနိုင်သည့်အတွက် ပုံညာတောင်၌ ကျောက်မီးသွေး တူးဖေ?
ဗင်နီဇွဲလား အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်က ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ နိုင်ငံတွင်းသို့ ရောက်ရှိရေး ဆော?
ရခိုင်ပြဿနာသည် တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်အရေးကြီး၊ စီမံချက်များကို ထိရောက်စွာ ဖော်ဆောင်ရန် ဒေါ်